कांग्रेसको जागरण अभियानसंगको अपेक्षा « Farakkon
प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले देशभर जागरण अभियान थालेको छ । प्रतिपक्षी भूमिका राम्रोसंग निर्वाह गर्न सकिन भन्ने आलोचना खेपीरहेको यो दलको जागरण अभियानले ऊ आफैलाई जागृत गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर अहिले सबै तिरवाट चासोका साथ हेरिएको छ ।
सम्पादकहरुसंगको एउटा अनौपचारिक छलफलमा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भनेका थिए, ‘इमानदारीका साथ भन्नुपर्दा हामीसंग प्रतिपक्षी हुनुको अनुभव नै छैन, तपाइहरुले नै सिकाउनु पर्छ ।’ त्यस्तै अर्को छलफलमा कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भनेका थिए, ‘कांग्रेसले सबै मुद्दामा मोरल्ली(नैतिक रुपमा) र ओरल्ली(वाकपटुटताका साथ) कम्युनिष्ट सरकारकाका गतिबिधिहरुको प्रतिवाद गर्नुपर्नेवेला आएको छ ।’
नेपालको सन्दर्भमा संसदीय पद्दतिको बलियो पक्षधर मानिने कांग्रेसले संसदमा प्रतिपक्षको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा अनभिज्ञता प्रकट गर्न मिल्दैन । बरु प्रतिपक्ष कस्तो हुनुपर्दो रहेछ भनेर संसदभित्र प्रतिपक्षीय संस्कार स्थापित गर्न सक्नु पर्ने हो । नेपाली संसदीय इतिहास हेर्दा, विगतमा प्रतिपक्षहरु ज्यादै नै असहिष्णु, उग्र र सडकमा समेत अराजकता प्रदर्शन गर्ने गरी प्रस्तुत भएका छन् । त्यो शैलीका बारेमा प्रसस्त वहसहरु पनि भएका छन् । संसदीय पद्दतिको वकालत गर्ने शक्ति बिपक्षीमा रहेका समयमा अव प्रतिपक्षी कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सन्देश दिनसक्ने गरी कांग्रेस आफैमा जागृत हुन जरुरी छ । सभापति देउवाले भने झै अनुभवको अभाव छ, तर पद्दतिप्रतिको समर्पणभाववाट आफुलाई अगाढि बढाउनका लागि अनुभवको कमीले छेक्न सक्दैन, छेक्न हुँदैन ।
कांग्रेस भित्र अर्को समस्या छ । लामो समयसम्म सत्तामा बसेका कारण कतिपय गलत प्रकरणमा उसलाई मुछ्ने गरिन्छ, तर कांग्रेसले त्यसको प्रतिवाद गर्न सकिरहेको छैन । बरिष्ठ नेताले भनेझै यही कारण मोरल्ली(नैतिक रुपमा) आफुलाई प्रस्तुत गर्न कांग्रेसका कार्यकर्ताहरु सकिरहेका छैनन् । प्रकरणमा पार्टी मुछिदैन, व्यक्ति मुछिन्छन् भनेर स्पष्ट पार्ने, अनाबश्यक आक्षेप रहेको भए त्यसको चिरफार गर्ने, न्यायिक निरुपणका लागि भएका प्रयासहरुका बारेमा कार्यकर्तालाई जानकार गराउने सन्दर्भमा कांग्रेसको यो जागरण अभियान कति सफल हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ । त्यस्तै, कांग्रेस कार्यकर्ताहरुमा बाकपटुटाको कमी छ र उनीहरुलाई हरेक ठाँउमा प्रतिबाद गर्नसक्ने बनाउन, उनीहरुमा इच्छाशक्ति भर्न यो जागरण अभियान कत्तिको सार्थक होला ? हेर्न बाँकी छ ।
बरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघ।
प्रमुख नेता स्वयंले पहिचान गरेका यी समस्याहरुवाट कांग्रेसलाई सर्बप्रथम मुक्त गर्न जरुरी नै छ । यी समस्यावाट मुक्त नहोउञ्जेल कांग्रेसले रचनात्मक प्रतिपक्षीय भूमिका, रक्षात्मक कार्यकर्ता निर्माण, आक्रामक संगठन निर्माण अभियानको थालनी गर्नमा समेत समस्या हुने छ ।
यी बाहेक पनि कांग्रेस भित्र प्रशस्त समस्याहरु छन् । ती समस्याहरु नेतृत्व आफैवाट सिर्जित समस्या नै हुन् । गुट व्यबस्थापनमा कांग्रेस नराम्ररी असफलताको मार्गमा उन्मुख छ । आफ्नो प्रतिपर्धी आफुभित्रै देख्नु त्यति धेरै अन्यथा नहोला, तर आफ्नो प्रतिपक्षसमेत कांग्रेस नेतृत्वले आफु भित्र नै देख्ने गर्दछ । यो आत्मघाती संस्कृतिले गाँझिदै गरेको पार्टीलाई यो जागरण अभियानले कसरी पार लगाउला ? यो पनि चासोको बिषय भएको छ ।
समसामयीक घटनाप्रति कार्यकर्ताहरुलाई जानकारी दिने र ती घटनाक्रमका सन्दर्भमा सकेसम्म साझा धारणा बनाउने संस्कार कांग्रेसमा बसाउन आबश्यक देखिन्छ । अध्ययन गर्ने, छलफल गर्ने बानी बस्यो भने यस्तो साझा धारणा निर्माण हुने हो ।
त्यसैगरी जनतासंगको सिधा सम्पर्क स्थापित गर्ने सवालमा पनि कांग्रेस चुक्दै आएको छ । जनताका प्राथमिक आबश्यकताहरुको सुची बनाउने, त्यसको कार्यान्वयनका लागि दवाव समूह निर्माण गर्ने र कार्यान्वयनका लागि अधिकतम दवाव दिने काम गर्नका लागि कांग्रेसले यतिबेला जागरण अभियान मार्फत कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित र प्रतिबद्ध बनाउनै पर्ने देखिन्छ ।
तिन तहका सरकार, तिनीहरुका अधिकार क्षेत्र र उनीहरुले गरिरहेका क्रियाकलापका बारेमा जनतालाई सूसुचित गर्ने काम कांग्रेसले गर्न सक्नुपदर्छ ।
तंगभंग भएका भातृसंस्थाहरुलाई सम्हालेर उल्लेखित काममा लगाउनु चुनौतिपूर्ण त छ, तर त्यसो गर्न नसक्ने हो भने जागरण अभियानको सफलता देखिने छैन ।
कांग्रेस कार्यकर्ताका केही खरावीहरु छन्, ती खरावीवाट स्वयं वीपी कोइराला समेत आजित थिए । ती खरावीको पहिचान गरी त्यसलाई हटाएर चुस्त दूरुस्त कांग्रेस निर्माणमा यो अभियान सफल हुनका लागि सर्वप्रथम ती खरावीको सुचि निर्माण गर्न सक्नु पर्दछ र ती खरावीवाट मुक्तीका लागि निर्ममतापूर्वक कदम चाल्न जरुरी पनि छ ।
वीपी कोइरालाले औल्याएका कार्यकर्ताका ७ खरावी यस्ता छन्, जस्को अध्ययनले कांग्रेसलाई ती खरावीवाट मुक्त गर्न सघाउन नै पुराउने छ ।
वीपीले औल्याएका खरावीहरु ः
७. अब म तपाईँहरूलाई मैले देखेको पार्टीको सातौँ र अन्तिम खराबी लेख्छु। साथीहरूमा उत्कर्ष र संकट, दुवै कालमा नैतिकताको अभाव भयो भने त्यसको ह्रास निश्चित छ। राजनीति र नैतिकता दुई भिन्न तत्व हुन् र सफल राजनीतिका लागि नैतिकताको आश्रय लिनु आवश्यक छैन भन्ने एकथरि विचार तपाईँहरूले पनि अवश्य नै सुन्नुभएको होला। यस विचारबाट अलि बढ्ता प्रभावित भएका कसै–कसैको भनाइ त के पनि छ भने सफल राजनीतिका लागि नैतिकता वाधक मात्र हुन्छ। एउटा अर्को थरिको भनाइ के छ भने नैतिकताबिनाको राजनीति सर्वथा पापाचार मात्र हो। एउटा विचारमा नैतिकताको अभावलाई नै राजनीतिक सफलताको पूँजी भनिएको छ। त्यहाँ यसमाथि आवश्यकताभन्दा ज्यादै बढी ध्यान दिइएको छ । (उल्लिखित खरावीहरु वीपीले आफ्ना एक कार्यकर्तालाई लेखेको पत्रवाट लिइएको हो ।)
यी र यस्ता खरावीहरुको पहिचान गर्दै बलियो कांग्रेस निर्माणका लागि जागरण अभियानलाई सफल बनाउने अथवा नवबनाउने कांग्रेसकै हातको कुरा हो । तर, सत्तापक्ष असहिष्णु र दम्भले भरिदै मनोमानीको वाटोमा हिड्दै गर्दा, बलियो, सुब्यबस्थित र दूरुस्त प्रतिपक्ष देशलाई चाहिएको छ ।